Vaovao | December 2019
Ny tifitifitra mahery vaika avy amin'ny taona 90 dia mijery ireo screenshotsa lehibe
Editor Ny Choice December 16,2019
Nalefan'ilay mpilalao ny alahelony ny Fallout 76 talohan'i Bethesda
Alohan'ny famoahana ny Fallout 76, mbola misy dimy volana sisa, fa ny olon-drehetra dia efa miomana hiatrika ny enta-mavesatra sy ny fahasarotana izay hitondra io fomba amam-panao io. Ny fanovana ho an'ny Fallout 4, novolavolan'ilay mpampiasa teo ambanin'ny solonanarana SKK50, dia natao hamoronana ny singa manan-danja amin'ny tetikasa Bethesda vaovao eo amin'ny milina tranainy.
Inona no rakotra mivantana amin'ny VKontakte, ary ahoana no manampy azy
Ny tambajotra sosialy "VKontakte" isam-bolana dia mahagaga ny mpampiasa azy amin'ny fanavaozana sy ny chips izay tsy manana mpifaninana. Tsy niavaka io Desambra io. Angamba, ny zavatra mahaliana indrindra amin'ny faran'ny taona dia iray amin'ireo loharanom-pitaovan'ny Runet - rakotra mivantana ho an'ireo vondrona VKontakte. Content Inona no rakotra mivantana Vary amin'ny fampiasana ny cover cover Live Ahoana ny fametrahana cover cover live eo amin'ny VKontakte: toromarika torolalana Inona no rakotra mivantana Ny cover fonctiona dia mihoatra lavitra noho ny kitapo fotsy ho an'ny fokonolona malaza.
Gigabyte Aorus AD27QD - ilay masoivoho voalohany manerantany
Gigabyte dia manomana ny hamotsorana mpitsikilo mirefy 27-inch Aorus AD27QD. Ny novolavola, araka ny filazan'ilay mpanamboatra, dia afaka manome mpilalao manana tombony amin'ny mpanohitra amin'ny lalao an-tserasera. Ny Gigabyte Aorus AD27QD dia mifototra amin'ny tontolon'ny IPS miaraka amin'ny teboka 2560x1440 piksela ary mihoatra ny 144 hz.
Nanambara ny hatezeran'ny Maid of Sker
Ny lalao dia miala folo kilaometatra avy amin'ny biraon'ny mpandraharaha ao amin'ny Wales Interactive. Ny anaran'ny horohoro dia manondro ny lalaon'ny valala Welsh mitovy anarana sy ny bokin'i Richard Blackmore Ny Girl from the Scher, nivoaka tamin'ny taona 1872. Na izany aza, miaraka amin'ireo asa ireo, ny lalao dia mifandray angamba amin'ny anaran'ny toerana hanaovana ny asa - Sker House (Sker House), any atsimon'i Pays de Galles.
Indray mipi-maso: Nofoanana indray ny famotsorana tsy misy fahatsiarovana.
Ny hatezerana mahatsiravina vokatry ny hatezerana, novolavolaina tao amin'ny Studio Studio Madmind Studio, dia navoaka tamin'ny alàlan'ny fanivànana sivana, tsy misy ny dokambarotra, feo ary sary. Ny mpikam-bola dia nikasa ny hamerina ny votoatiny ho an'ny mpilalao miaraka amin'ny fanampiana ny patch, ary avy eo amin'ny dika mitovitovy amin'ny lalao, saingy samy tsy nahomby avokoa izany.
Ny Steam dia nantsoina lalao malaza indrindra tamin'ny tapany voalohan'ny 2018
Ny tolotra fanodinana nomerika ho an'ny lalao Steam dia namoaka ny tanjon'ny tetikasam-baovaon'ny baolina ho an'ny ampahany voalohany amin'ny 2018. Ao Rosia, ny Ligy Rocket, Counter-Strike Global Offensive, PUBG sy GTA 5 no anisan'ny loham-pivarotana tsara indrindra. Ankoatra ny fanombanana ny varotra ankapobeny, ny sampana Steam dia nanomana lisitra samihafa amin'ireo vokatra vaovao tsara indrindra, ny VR sy ny lalao izay milalao ny ankamaroan'ny mpilalao.
Ny Electronic Arts dia nanambara ny fananganana sehatra fiadian-drakotra amin'ny rahona
Ny teknolojia avy amin'ny EA dia antsoina hoe Atlas Project. Ny fanambarana mifanaraka amin'izany ao amin'ny blaogy ofisialin'ny Electronic Arts dia nanao tale ara-teknika an'ny orinasa Ken Moss. Project Atlas dia rafitra rahona natao ho an'ireo mpilalao sy mpandrindra. Raha ny hevitry ny mpilalao dia mety tsy misy fanavaozana manokana: ny mpampiasa dia mandefa ny fampiharana mpanjifa ary manomboka ny lalao ao, izay vita amin'ny serivisy EA.
Ny mpamorona ny Undertale dia namoaka ilay mistery mampiavaka ny lalao vaovao
Asao ny mpilalao hiditra amin'ny fanadihadiana. Ny andro iray tao amin'ny kaonty Twitter an'ny Undertale, navoaka ny tranokala Indy Tafo Fox telo taona lasa izay, nisy rohy iray nivoaka tao amin'ny deltarune.com, izay anangonan'ireo mpitsidika ny fametrahana tranokala sasany amin'ny lohateny SURVEY_PROGRAM ("Fandaharan'asa momba ny fandrefesana").
Miala amin'ny Electronic Arts noho ny Star Wars ireo mpandrindra
Ny raharaha dia voalaza fa tsy nahomby ny Star Wars Battlefront II. Ny Studio Soedoà DICE, izay an'ny Electronic Arts, dia namoy ny 10% amin'ny mpiasa tamin'ny herintaona, na olona 40 teo ho eo tamin'ny 400. Na izany aza, araka ny tatitra sasany, io isa io dia ambany noho ny tena izy. Ny antony roa mahatonga ny fivoahan'ny mpamorona avy amin'ny DICE dia antsoina.
Ny tahiry amin'ny fananganana gadgets dia ho $ 7 tapitrisa i Apple
Fitsarana Aostraliana iray dia nampandoavina lamandy 9 tapitrisa Aostralianina tamin'ny Apple, izay mitovy amin'ny 6,8 tapitrisa dolara amerikana. Koa ny orinasa dia tsy maintsy mandoa ny fandoavana ny fanamboarana smartphones maimaim-poana, izay mijanona noho ny "fahadisoana 53", araka ny tatitra avy amin'ny Australian Financial Review. Ilay antsoina hoe "fahadisoana 53" dia niseho taorian'ny fametrahana ny iPhone 6 tamin'ny andiany faha-9 tao amin'ny iOS ary nitarika ho amin'ny fanakanana ny fitaovana tsy azo ovaina.
Ny mpandrindra FIFA dia mamaha ny fahadisoana mampalahelo
EA dia namoaka patina ho an'ny FIFA 19, izay nahatonga ny fanitsiana tsy hoe mivantana fotsiny amin'ny lalao, fa nanitsy ihany koa ny tsy fahazoan-kevitra izay nanjary meme. Ny mpilalao baolina kitra 36 taona Petr Cech, izay nilalao ho an'i Arsenal ao Londona, dia fantany fa tsy noho ny asany fotsiny, fa noho ny bika aman'endriny: taorian'ny lozam-pifamoivoizana mafy tamin'ny taona 2006, Cech dia nandray ny saha foana tamin'ny fiarovan-doha.
12-core AMD Ryzen mpandroso zava-mahadomelina dia nipoitra tao amin'ny ben'ny mpampiasa User Benchmark
Ny filazana fa ny mpandrindran'ny tarika Ryzen 3000 dia hahazo valiny mihoatra ny valo, ny lehiben'ny AMD Lisa Soo dia niteny tapa-bolana lasa izay, saingy ny isa maromaro amin'ireo singa mpanatontosa ao amin'ny sambo vaovao dia mbola tsy fantatra hatramin'izao. Ny fampahalalana farany avy amin'ny tranonkala benchmarking UserBenchmark dia nanazava kely ny toe-javatra: farafaharatsiny iray ny 12-core modely dia ho tonga ao amin'ny fianakaviana CPU Ryzen faha-3.
Firaxis dia mbola mizara ny antsipirian'ny fanampiana vaovao ho an'ny Civilization VI
Amin'ny fanampiana ny fanangonana Storm amin'ny Civilization VI dia ho firenena vaovao. Ny Empira Ottoman, tarihin'ny Suleiman matanjaka, dia nokendren'ny hetsika miaramila mahery fihetsika. Ny singa miavaka avy amin'ny firenena dia ho toy ny ampahany farany amin'ny lalao, ny Janissaries. Hiseho ao amin'ny Ottomans izy ireo fa tsy ny mozika mahazatra. Ireo singa ireo dia nampitombo ny heriny sy ny fandaniana ambany raha oharina amin'ny vondrona mitovy amin'izany.
Manakana ny kaonty 70 tapitrisa ny Twitter
Ny tolotra fitorahana bilaogy kiritika dia nanangana ady lehibe tamin'ny spam, trolling and fo news. Tao anatin'ny roa volana monja dia nakaton'ny orinasa ny kaonty 70 tapitrisa mifandraika amin'ny asa ratsy, hoy ny The Washington Post. Nanomboka nanaisotra ny kaonty spam hatramin'ny volana oktobra 2017 ny Twitter, saingy tamin'ny volana mey 2018 dia nihanitombo ny haavon'ny fanakanana.
Ny dikan-drakitra iray amin'ny iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika fanta-daza indrindra amin'ny faran'ny taonjato farany, Duke Nukem, dia voaomana ho amin'ny fampandrosoana. Ireo mpanoratra dia mampanantena mpiady mahafinaritra miaraka amin'ny vazivazy mainty sy fihetsika mahery vaika amin'ny fomba "Deadpool". Ny tetikasa dia mbola eo am-piandohan'ny famolavolana aloha, saingy efa be loatra ny zava-misy sy tsaho.
Facebook dia mandoa an-tsokosoko ireo mpampiasa amin'ny fanangonana ny angona manokana
Tamin'ny 2016, ny tambajotra sosialy Facebook dia namoaka ny fampiharana Facebook Research, izay manara-maso ny hetsika ataon'ny tompona smartphone ary manangona ny angon-draketrany manokana. Ho fampiasana azy, ny orinasa dia mangalatra an-tsokosoko $ 20 isam-bolana, napetraky ny mpanao gazety avy amin'ny gazety TechCrunch. Araka ny hita nandritra ny fanadihadiana, Facebook Research dia andian-tsarin'ny mpanjifa Onavo Protect VPN.
Instagram dia manokatra horonan-tsary ho an'ireo horonantsary mihetsika
Instagram dia nanambara ny fanombohan'ny serivisy lahatsary iray izay ahafahanao maka ny sarim-piraketana avoakany hatramin'ny ora iray. Ny mpampiasa dia afaka mijery horonantsary toy izany ao amin'ny Instagram ihany koa ary amin'ny fampiharana manokana - IGTV. Araka ny filazan'i Kevin Sistrom, Instagram CEO, ny serivisy vaovao dia noforonina mba handravahana ny votoatin'ny media amin'ny smartphones ary izany no hikajiana ny horonantsary rehetra ao aminy.
Hiantso ny stickers WhatsApp
Ny mpitsidika WhatsApp malaza dia mbola tsy nahazo fanohanana amin'ny stickers, saingy mety hiova izany. Araka ny fanontana an-tserasera WabetaInfo, ireo mpikarakara ny serivisy dia efa nanandrana karazana vaovao ao amin'ny tranonkala beta amin'ny Android apps. Sambany vao nivoaka ny sticker tao amin'ny fivorian'ny test de WhatsApp2.
Studio Bethesda dia niresaka momba ny drafitra momba ny fampandrosoana ny Fallout 76
Ireo mpikarakara ao Bethesda dia nanolotra drafitra momba ny fampandrosoana ao amin'ny tetikasam-panafahana an'ny Shootout 76-MMO. Ny mpilalao dia andrasana amin'ny hetsika telo maneran-tany, izay samy lavo amin'ny fotoana voafaritra manokana. Amin'ny lohataona dia hisy ny fanavaozana "Wild Appalachia". Ny hetsika voalohany dia ho tsapa amin'ny 12 martsa, ny mpilalao dia atolotra mba hisotro labiera ary handrara ny "moonshine corals" ao amin'ny lalao.
Nandamina fivarotana fahavaratra ny steam
Ny fizarana nomerika ny lalao Steam dia nanambara ny fiandohan'ny fivarotana fahavaratra. Hatramin'ny 5 Jolay, ny rehetra dia tsy afaka mividy tetikasa fanatanjahantena malaza amin'ny fihenam-bidy, fa koa mahazo loka amin'ny lalao mini-mini. Mandritra ny fivarotana, ny mpampiasa Steam dia hanana fahafahana hividy amin'ny vidin'ny vidiny ireo lohateny vaovao sy ireo hitsikitsika malaza indrindra tamin'ny taona teo aloha.
https://termotools.com mg.termotools.com © Vaovao 2019